मैलै पाएको उचाईबाट खस्ने डर छैन : सन्दीप लामिछाने (विशेष अन्तर्वार्ता ) - Himalayan Kangaroo
मैलै पाएको उचाईबाट खस्ने डर छैन : सन्दीप लामिछाने (विशेष अन्तर्वार्ता )
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने मंगलबार इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) खेल्न भारत प्रस्थान गर्दैछन्। गत माघको दोस्रो साता भएको आइपीएलको अक्सनमा सन्दीपलाई दिल्ली डेयरडेभिल्सले २० लाख भारतीय रुपैयाँमा टिमसँग अनुबन्ध गरेको थियो।
दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि सन्दीपले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि आफ्नो क्रिकेट यात्रा र भविष्यका बारेमा बोलेका छन्। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा सन्दीपसँग गरिएका सवाल जवाफको सम्पादित अंशः
मंगलवार दिल्ली जादै हुनुहुन्छ । कस्तो लागि रहेको छ अहिले ?
एक्साइटेड छु। यो मेरा लागि राम्रो अवसर हो। नयाँ प्लेटफर्म छ। त्यहाँबाट धेरैकुरा सिकेर नेपाली क्रिकेटमा केही गर्ने सोच छ। सिनियर दाईहरुले यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो। उहाँहरु प्रति धेरै आभारी छु। किनभने विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन पाँच देखि उहाँहरुले नेपाललाई एक दिवसीय अन्तराष्ट्रिय मान्यता मान्यतासम्म ल्याइपुर्याउन खेल्नु भएको भुमिका अतुलनिय छ। त्यही नेशनल टिमको एक भाग हुन पाउँदा आफूपनि खुशी छु।
दिल्लीका प्रशिक्षक तथा टिममेटसँग कुराकानी हुन्छ त ?
हामी सवैजना विस्तारै घुलमिल हुदैंछौ। गेम प्लानका विषयमा पनि हुन्छ हाम्रो। व्यवस्थापकहरुसँग पनि कुरा भइरहेको छ। समाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर होस् या अन्य तरिकाले जुन किसिमले उहाँहरुले अहिलेसम्म सर्पोट देखाइरहनु भएको छ। त्यो मेरालाई प्रेरणादायी छ।
आइपीएलको यात्रा कस्तो हुने अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
मेरो यहाँ देखि आइपीएलसम्मको यात्रा भिन्नै प्रकारको हुने ठानेको छु। आइपीएलको अन्त्यसम्म पनि जुन कुरा हुन्छ त्यो मेरालागि सिक्नका लागि नयाँ कुरा हुनेछ।
कहिले देखि प्रशिक्षण सुरु हुन्छ त दिल्लीमा ?
मंगलवार जाँदैछु। अनि स्वास्थ्य परिक्षण हुन्छ। सम्भवत : बिहीबारबाट हाम्रो प्रशिक्षण सुरु हुन्छ होला।
सन्दीपले आइपीएलमा नेपाललाई चाही कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ त ?
मैले जुन अवसर पाएको छु। यदि मेरो र दिल्लीको राम्रो प्रदर्शन भयो भने भविष्यमा सिनियर दाईहरु, जसले म भन्दा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। उहाँहरुका लागि पनि बाटो खुल्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु।
प्लेइङ एलेवेनमा मौका पाउनुहोला त ?
टिमको जुन बेस्ट कम्बिनेशन हुन्छ प्लेइङ एलेवेनमा त्यसैले मौका पाउने हो। अनि कस्तो सिच्युएसनमा खेल्दैछौं। टिमको प्लान के छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। मौका पाए भने अहिले राष्ट्रिय टिमका लागि जति इफोर्ट लगाइरहेको छु। त्यो दिल्लीका लागि पनि लगाउनेछु। म खेलूँ नखेलुँ दिल्ली डेयरडेभिल्सले जिति राखोस् र टुर्नामेन्ट पनि जिऔं भन्ने चाहाना छ।
अहिलेसम्म सन्दीपले एशोसियट राष्ट्रबाट खेल्यो अब भने विश्वका उत्कृष्ट खेलाडीहरु खेल्ने प्लेटफर्मबाट खेल्दैछ। त्यो अनुभव चाही कस्तो होला जस्तो लाग्छ?
म पहिले सानो हुँदा पारस, ज्ञानु, बसन्त, शरद दाईसँग खेल्ने सपना देख्थे। त्यो सपना पुरा भइसक्यो। उहाँहरुसँग खेल्दा जुन खुशी थियो। त्यो खुशी अहिलेपनि त्यत्तिकै छ र दिल्लीसँग खेल्दा पनि त्यतिकै रहेनेछ झै लाग्छ।
आइपीएल सन्दीपका लागि अवसर हो कि चुनौती ?
मेरा लागि सवैकुरा अवसर हुन्छ। किनभने त्यहाँ धेरैकुराहरु हुन्छ, सिक्ने। हाम्रै टिममा अमित मिश्रा जस्ता लिजेन्ड लेगस्पिनरहरु छन्। आइपीएलमा लामो समय खेलिसकेका र लिडिङ विकेट टेकर हुन्। उनीहरु जस्ताको अनुभवबाट धेरैकुरा सिक्न सक्छु। त्यसैले यसलार्इ चुनौती भन्दा पनि अवसरका रुपमा लिएको छु।
१७ वर्षमै एकपछि अर्को गर्दै ठूला अवसरहरु पाइरहनु भएको छरु तपाईसँग त्यस्तो स्पेशल के छ जसले यस्ता अवसरहरु एकपछि अर्को गरि पाए झै लाग्छ ?
सवैभन्दा पहिले म नेपाली टोलीमा छु। सायद म नेपालका लागि नखेलेको भए, आज यी अवसरहरु पाउदैन थिए होला। सिनियर दाईहरुको अनुभव र उहाँहरुबाट पाएको ज्ञानलाई मैदानमा शतप्रतिशत दिने आफ्नो बाँनीले पनि यहाँसम्म पुर्यायो झै लाग्छ। म जहिले पनि आफ्नो तर्फबाट राम्रो गर्ने प्रयास गर्छु। आफूले राम्रो गरेभने टिमलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्छु। यी कुराहरुले नै यहाँसम्म पुर्यायो कि झै लाग्छ।
जति उचाई चढ्न सजिलो छ, तर त्यहाँ त्यत्तिकै अप्ठारो छ भनिन्छ ? अहिलेको उचाईबाट तल झरौला कि भन्ने डर लाग्छ कि ?
आफूले इमान्दार भएर राम्रो काम गर्यो भने म तल झरौला भन्ने डर लाग्दैन्। क्रिकेट खेल्नु हाम्रो काम हो। यस काममा हामी जति इमान्दार भएर लाग्यौं त्यसपछि कुनैपनि कुनै कुराको पनि डर हुँदैन्। क्रिकेट हो, उतारचढाव त भइरहन्छ तर त्यो उतारचढावलाई चाही आफूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसमा पनि भर पर्छ।
Previousमेलम्चीको पानी अझै ढिला आउने
Nextराउटेले प्रधानमन्त्री अाेलीलार्इ भने, शेरबहादुरले झुक्याए, तपाईँले नझुक्याउनु
भूकम्पले भत्काएको काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण शुरु,चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
३१ बैशाख २०७५, सोमबार १३:४७
अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया नै किन र कसरी जाने ?
७ पुष २०७५, शनिबार ०९:२८